Mandroatra - Henan Arintany Research Keming Mechanical Co., Ltd.
mandroatra ny fanaovana fampiharana
Sombin-javatra simenitra, izay antsoina koa hoe aircrete, foamed simenitra, foamcrete, finday maivana simenitra na mihena hakitroky simenitra, dia faritana ho toy ny simenitra slurry monina, miaraka amin'ny farafahakeliny ny 20% (isaky ny boky) entrained sombin-javatra any an-plastika rihitra.  Toy ny tsy misy marokoroko aggregate indrindra no ampiasaina amin'ny famokarana ny sombin-javatra mivaingana ny teny marina dia hatao hoe rihitra fa tsy simenitra; dia azo atao hoe "foamed simenitra" koa. Ny hakitroky ny sombin-javatra mivaingana matetika Miovaova arakaraka ny 400 kilao / m³ ny 1600 kilao / m³. Ny hakitroky dia raha ny tokony ho fehezin'ny solon'i tanteraka na ampahany amin'ny tsara aggregate amin'ny sombin-javatra.
Foamed simenitra matetika dia ahitana ny slurry ny simenitra sy ny lavenona manidina na fasika sy rano, na fahazoan-dalana hidirana ny sasany mpamatsy simenitra sy rano madio ny mpandraharaha mandroatra miharoharo noho ny maivana. Ity slurry no mifangaro bebe kokoa amin'ny synthetic aerated sombin-javatra ao amin'ny fampifangaroana simenitra fototra. Ny sombin-javatra noforonina mampiasa mandroatra mpandraharaha, voatsatso rano sy ny rivotra avy amin'ny gropy. Ny mpandraharaha mandroatra nampiasaina dia tsy maintsy ho afaka mamokatra rivotra ka manjary miboiboika amin'ny avo lenta ny fahamarinan-toerana, mahatohitra ny ara-batana sy simika fizotry ny fampifangaroana, mametraka sy manamafy.
Foamed fifangaroana mivaingana azo alatsaka na pumped ho lasitra, na mivantana ho singa ara-drafitra. Ny sombin-javatra mahatonga ny slurry mba mikoriana malalaka noho ny thixotropic fitondran-tena ny sombin-javatra ka manjary miboiboika, famelana azy io ho mora naidina tamin'ny teny, na amin'ny voafidy ara-nofo dia mitaky mould.The viscous hatramin'ny 24 ora hihamafy (na toy ny kely toy ny adiny roa raha etona sitrana amin'ny mari-pana hatramin'ny 70 ° C mba hanafaingana ny dingana.), miankina amin'ny hiovaova ao anatin'izany ny mari-pana sy ny hamandoana Ambient. Raha vao nanamafy, niforona vokatry ny mety ho afaka hiala amin'ny bobongolo.
Foamed simenitra vokatra azo amin'ny maina densities ny 400 ny 1600 kilao / m³, amin'ny 7-day hery ny 1 ka hatramin'ny 10 eo ho eo N / mm² tsirairay avy. Sombin-javatra mivaingana ny afo mahatohitra, sy ny mafana ary acoustical insulation fananana tsara ataovy ho isan-karazany ny tanjona, tsy miaro gorodona sy ny tampon-trano, mba mahafoana famenoana. Izany ihany koa ny hady kely indrindra ilaina famerenana.
Vitsy ny fampiharana ny sombin-javatra mivaingana dia:
precast rindrina singa / kobany
hatsipy-in-situ / nandatsaka-in-toerana rindrina
miaro onitra nametraka
insulation rihana screeds
insulation tafo screeds
sunken anjara mameno
hady kely famerenana
zana-base amin'ny lalam-
mameno ny hollow biriky
efa voarafitra mialoha insulation zana-kazo
Sombin-javatra mivaingana dia zavatra maro fitaovana amin'ny trano famokarana fomba tsotra izay somary lafo raha oharina amin'ny autoclave aerated simenitra. Kamban-teny sombin-javatra mivaingana mampiasa lavenona lalitra ao amin'ny slurry Mix dia mora foana izy ka tsy manana fiantraikany ara-tontolo iainana. Sombin-javatra mivaingana dia novokarina tamin'ny isan-karazany ny densities amin'ny 200 kilao / m³ ny 1600 kilao / m³ arakaraka ny fampiharana. Hakitroky vokatra maivana mety ho faty an-samy hafa habe. Raha ny vokatra dia heverina ho endriky ny simenitra (amin'ny rivotra ka manjary miboiboika fanoloana aggregate), ny ambony sy ny acoustical mafana miaro toetra manao azy ho tena hafa noho ny mahazatra fampiharana simenitra.
Vao haingana ny fironana sy ny fampandrosoana
Mandra-folo taona lasa izay, ny sombin-javatra azo tsapain-tànana dia heverina ho malemy sy tsy maharitra amin'ny avo shrinkage toetra. Izany dia vokatry ny sombin-javatra miovaova ka manjary miboiboika niafara tamin'ny sombin-javatra mivaingana manana fananana nety ho ambany dia ambany mamokatra hakitroky (Tsy ampy 300 kilao / m³ maina hakitroky) ary koa ny fampiharana ara-drafitra nitondra entana. Noho izany dia zava-dehibe mba hahazoana antoka fa ny rivotra tao an-foamed entrained mivaingana misy teny ao miovaova tamin'izany andro izany ka manjary miboiboika fanamiana tena kely sisa rava sy mitoka-monina, ary tsy izany no hampitombo ny permeability ny simenitra eo amin'ny voids Mametaka.
Ny fampandrosoana ny synthetic-anzima mifototra mandroatra mpiasan'ny, sombin-javatra fahamarinan-toerana sy mampitombo admixtures niteraka sombin-javatra manokana, ary pumping fitaovana fampifangaroana nihatsara ny fahamarinan-toerana ny sombin-javatra mivaingana mandroatra ka noho izany, ka tsy azo atao ny mpanamboatra toy ny mazava tahaka ny 75 kilao / m³ density.The anzima ahitana ny tena mavitrika biotechnological proteinina ny fiandohana sy tsy miorina amin'ny ratsy tarehy proteinina hydrolysis.In foamed mivaingana tato anatin'ny taona vitsy dia nampiasaina be amin'ny sampanan-dalana, trano ara-barotra, loza fanarenana trano, sekoly, trano sy ny trano fonenana ny fandrosoana eo amin'ny firenena toa an'i Alemaina, USA, Brezila, Singapore, India, Malezia, Koety, Nizeria, Botswana, Meksika, Indonezia, Libya, Arabia Saodita, Alzeria, Iraka sy Ejipta.